ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက် စေတမန်: မဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသို့ (အပိုင်း ၁၁)
ကျွန်တော်ပြောပြောနေတဲ့ ပီတာကျော်ရဲ့ ဘလော့ပါ http://kopeter.blogspot.com အောက်ကတော့ အဖြေမရှိသောသူများအား ဗုဒ္ဓဘာသာကို စွန့်လွှတ်ဖို့ သွားပြောထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်.
မင်းတို့ငါကို ပြောပြနေတာက အဖြေတွေလား ဘာတွေပြောနေတာလဲ အဓိပ္ပါယ်မရှိစကားတွေပဲ အစ္စလာမ်ဘာသာမှာ မိုဟာမက်ကို ကိုးကွယ်ကြတယ်လို့ တစ်ကြောင်းပါလား ငါ့ပြောနေတာက မင်းတို့ ဦးနှောက်မရှိဘဲ ကိုးကွယ်ကြတဲ့ ရောဂါသည်လေး ဂေါတာမအကြောင်းကို ပြောပြနေတာ။ ခရစ်ယာန်သမ္မာကျမ်းစာခိုးချပြီး ရေးစရာ အကြောင်းမရှိ။ ခရစ်တော်ကလည်း မည်သူတဦးတယောက်ကိုမှ တိုက်ခိုက်ဖို့ သင်ပေးထားတာ မဟုတ်ဘူး။ ၇န်သူကိုတောင် ချစ်ဖို့ပြောထားတာ.... မင်းတို့တွေသာ ဟိုတောင်ခိုးချ မြောက်ခိုးချ ခေတ်တွေက တိုးတက်လာတော့ သင်ကြားပို့ချရေးဆွဲထားတဲ့ ကျမ်းကတလွဲဖြစ်ကုန်တော့ ခရစ်ယာန်ကျမ်းကို ခိုးချလာတယ်.... ပြီးတော့ ခရစ်ယာန်က မင်းတို့ဆီက ခိုးချတယ်လို့ စွပ်စွဲတယ်.... ဟားဟား မင်းတို့ပဲ တ က်နိုင်တယ်. မင်းတို့ ကျမ်းတွေအားလုံးက ဟိန္ဒူကျမ်းစာအုပ်ကို အခြေခံပြီး ထွက်လာတာ… ခရစ်ယာန်ရဲ့ အင်အားစုကိုလည်း ကြောက်လန့်လာတယ်. မြန်မာနိူင်မှာဆိုလည်း ချင်းတောင်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာမရှိဘူး စေတီသွားတည်တယ် ဘုရားကျောင်းတွေ မီးရှို့ တယ်.......
မင်းတို့ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ခရစ်ယာန်၊မွတ်စလင်မ်တွေ မီးရှို့ ဖူးလား ဖျက်ဆီးဖူးလား မင်းတို့ကောင်တွေကို နိူ်င်ငံရေး ကို အကြောင်းပြပြီး ခရစ်ယာန်နိုင်ငံတွေမှာ ခိုလှုံခွင့်တောင်း ပြီး ရင် ခရစ်ယာန်ကိုစော်ကားလာတယ်. ..ငါတော့ အဲတာတွေကို သင်ခန်းစာယူတယ်. မင်းတို့ကောင်တွေက ပီတာကျော်တင်တဲ့ ပို့စ်အတိုင်းပဲ ကိုယ်မွေးတဲ့ မျောက် ကိုယ်ကို ပြန်ချောက်ဆိုတာ တကယ်မှန်တာပဲ … ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ကို သနားလို့ မကယ်ကောင်း ကယ်မိပါက မိမိအား အမှန်တကယ် ဒုက္ခပေးမည့် အမှန်ပါ. ..မင်းတို့ကို ငါစကားနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်မူကို မင်းတို့ကို အနိူ်င်ပေးပါတယ်ကွာ ဒါပေမဲ့ ဒီဗုဒ္ဓဘာသာကို စွန့်လွှတ်လိုက်ကြပါ...... မမှန်မကန်မူတွေ အများကြီးပဲကွာ ဘာအတွက် မင်းတို့ ဂေါတာမကို ကိုးကွယ်နေတာလဲ မင်းတို့ မြန်မာလူမျိုးတွေ မုန်းလှပါတယ်ဆိုတဲ့ ကုလားလူမျိုးလေးကွာ မင်းတို့အခုတော့ ချစ်နေကြတာလား။ မင်းတို့ကိုးကွယ်တဲ့ကောင်က မင်းတို့ကျမ်းအရပဲ တဏာရူး မိန်းမငါးယောက်ရှိ ကိုယ်ညီမကို ကိုယ်ပြန်ယူ ရောဂါသည်လေး ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင်းတွေကြောင့် ကိုးကွယ်နေတာလဲ http://messengerforbuddhist.blogspot.com/2010/01/blog-post_01.html aung aung: မင်းက ဘာကောင်လဲတော့ မသိပါ...... အိပ်ရာထဲမှာ စဉ်းစားပြီး လာမရေးနဲ့ ဒီနေရာမှာ သွားကြည့် ကျမ်းအဟောင်းကို မင်းတို့စောက်ကုလား မမွေးခင်ကတည်းက ရှိတာ. . သူတောင်းစာ ဘုန်းကြီးများ အထူးပင် ကြောက်လန့်လျက် ရှိနေပါတယ်...... သူတောင်းစားကျောင်းမှ ထိုင်ပြီး တောင်းရမှာထက် အပြင်မှာ ခွက်ဆွဲပြီး တောင်းရမည့်အရေးအား ကြောက်လန့်နေပါတယ်.... ဒါကြောင့် မဟုတ်မမှန်သော ၀ါဒများကို ဖြန့်ချီပြီး သူတပါး ဘာသာများကို တိုက်ခိုက်နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်.
Posted by messenger at 1:13 AM